Iji akwa rubs Vs aka aka | Ngwọta OMG
Uzo Oku Oku Mberede, Uwe Ojii Weghara Igwefoto, GPS Ndepụta & Ntinye Ntugharị Ntugharị Ntugharị, Igwefoto Nledo Igwefoto Zoro ezo - &lọ & Hospitallọ Ọgwụ
Whatsapp: Singapore + 658333-4466, Jakarta +62 81293-415255 (51 Ubi Ave 1 # 05-07A Level 7, S408933 - Mepee: Mọnde-Satọde: 10 am-6pm)
Iji aka na-aṅụ aka mmanya na-aba n'anya
N'iji ọgwụ na-eme ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya (dịka, mmiri, mmiri gel, ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ụfụfụ) adịghị atụchite maka
aka aka na nhazi nke otu. A chọrọ iji aka aka wepu ala anya. Mgbochi aka nke mmanya na-aba n'anya ga-ejedebe na oge ndị na-enweghị ncha. Ngwaahịa ndị a chọrọ 60% ma ọ bụ karịa ka ọ dị irè na-egbu egbu germs. Ha na-egbu egbu ma ọ bụrụ na ụmụaka na-enyocha ha, ha dị ọkụ.
Ndị nlekọta / nkuzi kwesịrị ime ihe ndị a:
Debe ojiji nke ị handụ mmanya na-aba n'anya na mpaghara nke ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ike ịbanye na ụmụaka (dịka, na kichin na-enweghị ike ịnwe ụmụaka ma ọ bụ mpaghara mmezi).
Gbochie aka ị handụ mmanya na-aba n'anya maka ịdị ọcha aka na mpaghara iji ụmụaka. Ọ bụrụ na-eji ha eme ihe na mpaghara ndị a n'ihi enweghị sinks, gbaa mbọ hụ na enweghị nwatakịrị nwere ike iji igbe ma ọ bụ ihe nkesa were onwe ya.
Jide n'aka na ịdị ọcha aka n'iji ị rubụ mmanya na-aba n'anya eme ihe kwekọrọ na ntuziaka nke onye nrụpụta. Usoro maka iji mmanya na-egbu mmanya kwesịrị ịgụnye ihe ndị a:
Tinye ngwa a choro nke ngwaahịa a n'aka aka nke aka ya ma gbakọọ ọnụ; na-ekpuchi ihe nile aka na mkpịsị aka ruo mgbe aka dị ọkụ. Na
olu dị mkpa kwesịrị ijide aka maka mmiri maka ma ọ dịkarịa ala 15 sekọnd ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ndị na-emepụta ahụ gosipụtara ya.
Lelee usoro nhazi maka iji aka ọcha na-eme ihe n'usoro iji jide n'aka na ha na-anapụta ya
ihe dị mkpa nke ngwaahịa ahụ ma ghara ịbanye ma ọ bụ rụọ ọrụ nkwụsịtụ n'ụzọ ọzọ.
Ụlọ nkwakọba ihe nke mmanya na-aba n'anya na-aba n'ime ụlọ ma ọ bụ ebe a kwadoro maka ihe ọkụ ọkụ.
Jiri nlezianya na-elezi anya ọcha na ịchọta ihe a na-ahụghị anya. Mgbe ejiri aka na-eme ihe,
lelee otutu ihe eji eme ihe iji jide n'aka na ekwesiri iji ego kwesiri ekwenye dika uzo
nyochaa na ndị ọrụ a na-enye ikike iji usoro a nke idebe onwe ha ọcha na-anọgide na-eji ihe ahụ eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Isi Iyi: Ekepụtara site na nchịkwa ọrịa na Ụmụaka na Ụlọ Akwụkwọ, 2nd Edition. Pịa ebe a maka ụlọ ahịa AAP www.aap.org/bookstore.
Nzuzo 10995 4 Echiche Taa
OMG Ngwọta - Singapore 500 Enterprise 2018/2019 nyere
Onwa Sat: 10am-6pm
(Oge ntinye chọrọ)